Global Aawaj | सामाजिक सेवामा सकारात्मक सोँच सामाजिक सेवामा सकारात्मक सोँच
सामाजिक सेवामा सकारात्मक सोँच
जब मानिस यो धर्तिमा जन्म लिएर आउँछ, समयको अन्तराल सँगै चेतना एवम सोचाइमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । जन्म हुनु नै मानिसको जीवनको सुरुवात र मानिसको रुपमा जन्मनु नै जीत हो । तर,मानवीय जीवनलाई सार्थक बनाउन वा मानवीय क्रियाकलापबाट पहिचान बनाउन सकेन भने कालान्तरमा उसको हार हो । मानिस जन्मनुको सार्थकता तब हुन्छ, जब उसले आफू सक्षम भएर असल भूमिका निर्वाह गरी सो भूमिकाबाट परिचित हुन सफल भएपछि मात्रै प्राण त्याग गर्छ। सामान्यतया यो संसारमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुनै स्थायी वा ठोस कुरा हुँदैन, केवल हुन्छ त हाम्रो सोचाई ।
महान दार्शनिक Shakespeare ले भने जस्तै There is nothing either good or bad but thinking makes is so. हरेक कुरालाई हामीले सकारात्मक सोचाइँबाट लिन सक्यौं भने सही सकारात्मक लाग्छ । त्यस्तै नकारात्मक तवरले सोच्यौं भने खराब वा नकारात्मक लाग्छ । पछिल्लो समय सबैजसो क्षेत्र,पेशा वा विषयमा बढी नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना भएको देखिने गरेका छन् । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल,सञ्चार माध्यममा त्यस्ता विषय चर्चाका विषय बनेका छन् ।
सकारात्मक सोँच हुने व्यक्तिले मात्रै समाज सेवा गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। सामाजिक सेवा विकासोन्मुख देशको विकासका लागि एउटा मेरुदण्ड हो। सामाजिक विज्ञानको मागमा रहेर विभिन्न मानव जीवन र उनिहरुको व्यवहार तथा सामाजिक समूहको अध्ययन र सोही अनुसार सहयोग र सहकार्य गर्नुलार्ई सामाजिक सेवा भनिन्छ । सामाजिक सेवा अन्य व्यवसाय भन्दा भिन्न र आत्मसन्तोषी हुन्छ । सामाजिक कार्यमा विशेष गरी असहाय र दुःखी व्यक्ती जो हामी भन्दा कम भाग्याशाली र निम्न स्तरका छन्, उनिहरुप्रति समर्पित भई सेवा गरिन्छ।
सामाजिक कार्यमा संलग्न हुँदा समुदायमा सेवाको भावना, उनीहरुको आत्मसम्मानको कदर, आफ्नो इमानदारिता र नैतिकताको प्रदर्शनसँगै काम गर्दा सधैं सामाजिक न्यायमा जोड र आफू सम्बन्धित काममा निपूर्ण भएको हुनु पर्दछ। सामाजिका कार्य यति सुन्दर हुँदा–हुँदै पनि हाम्रो देशमा भने जति व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । सामाजिक कार्य विशेषगरी समाज र नागरिकप्रति समर्पित कार्य हो। यो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा टाढा हुने गर्दछ । सामाजिक सेवा कल्याणकारी कार्य भएकोले पछिल्लो समयमा युवा पिढिँहरु सामाजिक सेवामा धेरै नै सक्रिय हुँदै आइरहेको देख्न सकिन्छ।
हरेक कुरालाई सकारात्मक नजरले हेर्नु नै सकारात्मक सोँच हो। यसो भनिरहँदा समाजमा नकारात्मक पक्ष र बस्तु छैनन् भन्ने होइन । तर, त्यस्ता पक्ष र विषयलाई प्रोत्साहन गर्नु वा आलोचना गर्नु दुबै नकारात्मक सोँचको उपज हो । हरेक मानिस भित्र विकराल बस्तु छन् । तर, तीनको पनि छुट्टै महत्व छ । शरिर भित्र विकराल पदार्थ भएतापनि मानिस सोँच, चेतना र व्यवहारले स्वच्छ,पवित्र र सचेत प्राणी मानिन्छ । सकारात्मक सोँचले नै हरेक व्यक्तिमा उर्जा र क्षमता सिर्जना गर्दछ। सफलताको मूल सुत्र पनि सकारात्मक सोँच नै हो । मानिस यस्तो प्राणी हो जसको वास्तविक पहिचान उसको विचारबाट हुन्छ । मानिसले जस्तो सोँच्दछ उ त्यस्तै बन्दछ ।
सकारात्मक व्यबहारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नै पाइन्छ । नकारात्मक व्यबहारबाट बीउ रोपेर सकारात्मक फल प्राप्तिको आशा गर्न कदापि सकिँदैन। सोचाई सकारात्मक भै दिए जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भइन्छ । पछिल्लो समयमा जतिपनि विकास भएका छन् । ती कार्यमा नयाँ पुस्ताको सकारात्मक सोँच र सक्रिय सहभागिता पनि रहेको छ । मानिसको उचाई र योग्दान उसको वर्ष र अनुभवले ले होइन कर्मले नाप्नु पर्छ । हामीले देश विकास गर्नु पर्छ भन्दै हिड्छौ तर, बिकास कसरी सम्भव छ ? यो कुरामा कहिल्यै ध्यान दिँदैनौं । यहि कारणले हामी नेपाली अहिलेसम्म तुलनात्मक रुपमा पछि परेका छौं । यसर्थ पहिला देश परिवर्तन वा विकास हुनु पर्छ भन्नुभन्दा पहिला हरेकले चेतनशिल प्राणी र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले आफ्नो सोँच परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक कार्यका थुप्रै तस्वीरहरु देखिन्छन् पाइन्छ। सामाजिक सेवामा लाग्नेहरुको भिड बढ्दो छ के साच्चिकै समाज सेवाका लागि समर्पित छ त यो भिड,समाज सेवामा लागिरहेका हरेक व्याक्तिहरुले वास्तवमै समाज सेवा गरेका छन् त ,समुदायमा मिलेर समुदायलाई अघि बढाउने दिशामा उनिहरुको सकारात्मक सोँच हो या क्षणि सहयोग र चर्चा ? समाजमा उनीहरुको चरित्र के कस्तो छ, सामाजिक भावले हो या देखावटीपन जस्ता थुप्रै प्रश्न र जिज्ञासाहरु रहेका छन् । सामाजिक सेवाका गतिविधि र भिडमा केही सकारात्मक र केही निहित स्वार्थ हेलान् । तर,सेवा लिनेले सेवा पाउनु भने जायज र महत्वपूर्ण हो ।
तर, सकारात्मक सोँचका साथ गरिने समाज सेवाले सेवा गर्ने र लिने दुबैलाई सन्तुष्ट प्रदान गर्दछ । एक अर्कालाई सहयोग गर्नु सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गर्नु, दुःख र अपठ्यारोमा परेका व्यक्तिलाई सहयोग र राहत प्रदान गर्नु मानवीय तथा परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको चलन नै हो । तर,समयको गति र विकाससँगै पछिल्लो समयमा सेवाहरु देखावटी र प्रचारमुखी भएका छन् । अन्तरआत्मादेखि सकारात्मक सोँचले गरिने सेवा लिने र दिनेबीच मात्रै रहेपनि प्रभावकारी हुन्छ । यद्यपि अझैपनि कैंयौं सामाजिक अभियन्ताहरु छन्,जसले निरन्तर सेवा गरिरहेका छन् । तर, आफूलाई प्रचार गर्न चाहाँदैनन् । जसले जहाँबाट जसरी सक्छ,त्यसरी नै आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरुलाई सेवा र सहयोग गर्ने हो भने कसैलै आफूलाई बेसाहारा,गरिब र दुखी सोच्ने थिएनन् होला ।
नेपालमा महाभूकम्प जाँदा ,तराई डुवानमा पर्दा ,पहाडमा पहिरो र हिमालमा हिमपहिरोले घरवारबिहन बनाउँदा कैंयौं व्यक्ति,संघसंस्थाले राहत ,सहयोग तथा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । त्यस्तै स्थानीय स्तरका क्लबदेखि अन्तराष्ट्रिय विभिन्न संघसंस्थाहरु समाज सेवाको नारा लिएर सञ्चालित छन् । यदि ती सबै व्यक्ति संघसंस्थाले निरन्तर तथा सक्रिय रुपमा वास्तविक आवश्यक पर्नेहरुलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने नेपालमा रहेको गरिबी र हुने र नहुने बीचको खाडल पुरिने थियो,दूरी मेटिने थियो । तसर्थ हरेक नागरिकले आफूलाई सचेत र जिम्मेवार नागरिक ठानेर आफ्नो स्थानबाट सक्ने भूमिका निभाउँदै सकारात्मक सोँचका साथ समाज सेवामा पनि संलग्न हुन आवश्यक छ । यसको मतलब यो होइन कि हामी आफ्नो काम छोडेर वा आफूसँग नभए पनि गर्नु पर्दछ । अरुलाई सहयोग गर्न र समाज सेवा गर्न पहिला आफू सचेत,सवल र सक्षम बन्न पर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै सकारात्मक सोँचले अघि बढौं ।